အယူတော်မင်္ဂလာ	# ဒေါသထွက်နေသော ဌက်များ / Angry BirdsPublished May 23, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အယူတော်မင်္ဂလာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged အယူတော် မင်္ဂလာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဇမ္ဗူဒီပါ လက်ယာ တောင်ကျွန်း နိမိတ်ထွန်း၏Published November 21, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,584)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,967)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,670)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,339)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,408)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,558)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,579)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,947)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,289)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,268)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,092)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,048)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,826)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,786)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,301)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,128)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,833)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,487)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,154)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,827)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,681)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,549)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,549)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,258)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,239)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,899)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,684)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,476)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,022)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !